Lacagta Ma Lagu Celi karaa Kaarka Hadiyadda Fiisaha | Jawaabaha ugu Fiican
Bogga ugu weyn Lacagta Kaarka Hadiyadda Ku Wareeji Koontada Bangiga | Tilmaan-Talaabo-Tallaabo-fudud oo fudud 2022-ka
Lacagta Kaarka Hadiyadda Ku Wareeji Koontada Bangiga | Tilmaan-Talaabo-Tallaabo-fudud oo fudud 2022-ka
Adduunku wuxuu noqday digital oo aad wax ku iibsato kuna bixiso adeegyada internetka. Sidoo kale, waxaad ku wareejin kartaa lacagta aad ku haysato kaarkaaga hadiyadda ee horay loo sii shubay xisaabtaada bangiga taasoo ka dhigaysa mid ammaan ah oo sahlan in la isticmaalo.
Dad badan oo isticmaala kaararka hadiyadda ayaa ku adag inay lacag kaarka hadiyaddooda ku wareejiyaan koontadooda bangiga.
Laakiin, tallaabada ugu horreysa ee la qaadayo waa in la hubiyo haddii kaarkaaga hadiyadda ahi kuu oggolaanayo inaad lacag ku wareejiso koontadaada bangiga.
Ka dib markaad dhammaystirto tallaabadan, markaa waxaad ku jirtaa tallaabada aad lacag uga wareejinayso kaarkaaga hadiyadda ee hore loo sii dhigay xisaabtaada bangiga si sahlan loo isticmaalo.
Aan aragno dulmar yar oo ku saabsan kaararka hadiyadda
Sida laga soo xigtay Investopedia, kaarka hadiyaddu waa kaarka debit -ka ee la sii diyaariyey oo ay ku jiraan qaddar lacag ah oo la heli karo si loogu adeegsado iibsiyada kala duwan.
Kaararka hadiyaduhu waa nooc kaadhadhka debit -ka ah ee la sii shubay oo lagu raray lacag loogu talogalay isticmaalka mustaqbalka. Xaaladaha qaarkood, waxaa loo isticmaali karaa inay ku bixiyaan qayb ka mid ah iibsiga lacag caddaan ah, deyn, ama deyn loo isticmaalo dheelitirka kharashka.
Hadda oo aad heshay fikrad ah waxa kaarka hadiyaddu yahay, sii akhri si aad u ogaato tillaabooyinka la qaadayo sida lacag looga wareejiyo kaarka hadiyadda ee koontada bangiga.
Jadwalka waxyaabaha ku qoran ee hoos ku qoran wuxuu ku siinayaa aragti guud.
Lacag Maku Wareejin Kartaa Kaarka Hadiyadda Waxaad Ku Wareejin Kartaa Koontada Bangiga?
Dabcan, waxaad ku wareejin kartaa lacagta inta badan kaararka hadiyadda ee la sii shubay akoonkaaga bangiga adoo adeegsanaya adeeg la yiraahdo CardCash.
Waxaa jira qaar kaararka hadiyadaha ah oo la tuuri karo oo la isticmaali karo oo keliya ilaa dheelitirku gaaro eber (0) halka inta badan kaararka horay loo shubay ay yihiin kuwo dib loo raran karo oo weligood la isticmaali karo.
Mahadsanid, waxaa jira hal hab oo la xaqiijiyay oo lacag looga wareejinayo kaarkaaga hadiyadda xisaabtaada bangiga.
Waxaad isticmaali kartaa adeegyada lacag -bixinta moobaylka sida CardCash (PayPal) si aad lacagtaada uga wareejiso kaarkaaga hadiyadda ama lacag -bixinta hore ee koontadaada bangiga.
Laakiin arrintu waxay tahay, way ka qaalisan tahay isticmaalka kaarka hadiyadda ama horay loo sii iibsaday kaarka lagu iibsado alaabta. Markaa hubso inay dhab ahaantii tahay qiimaha lacagta caddaanka ah ee aad ka rabto kaarka hadiyadda.
Immisa ayay ku kacaysaa in lacag laga wareejiyo Kaarka Hadiyadda loona wareejiyo Koontada Bangiga?
Waxaa jira ikhtiyaarro kaladuwan oo kala -wareejin ah kuwaas oo ah soo dejinta akhristaha laba jibbaaran ama adeegsiga MoneyGram
Asal ahaan, waxaad ku bixinaysaa iyadoo lagu salaynayo cadadka aad kaga wareejinayso kaadhka hadyada akoonkaaga bangiga lacag ka yar $200. MoneyGram waxay kugu dalacaysaa khidmad sal ah $1.99
Halka xaddi ka sarreeya $200, waxay ku dallaci $1.99 + 1% lacagta la wareejiyay. Tusaale ahaan, haddii aad isticmaalayso $500, khidmadu waxay noqonaysaa $1.99 + $5, wadar ahaan $6.99.
Ikhtiyaarka labaad, Haddii aad haysato akhristaha Fagaaraha, waad kaxayn kartaa kaarka sida kaar kasta oo kale. Haddii aadan haysan mid, waxaad ka heli kartaa akhristaha magstripe -ka aasaasiga ah marka aad is -qorto.
Markaad is -qorto kadib, waxaad bixin doontaa lacag dhan 2.75 boqolkiiba is -mariid kasta, si loo gooyo wadartaada.
Tani waa habka ugu fudud ee lagu xawilo lacagaha, gaar ahaan haddii akhristaha labajibbaaran uu ku xiran yahay akoonkaaga bangiga.
Laakiin haddii aadan haysan akhriste Square, weli waad soo dejisan kartaa barnaamijka oo waad is qori kartaa, laakiin waxaad bixin doontaa boqolkiiba 3.75 haddii aad gacanta ku geliso macluumaadka kaarka.
kan akhri, Sida loo hubiyo haddii Kaarka Amaahdu uu shaqeynayo | Tilmaamaha Tallaabada-2022
Mudo intee leeg ayay qaadataa in lacagaha kaarka hadiyadda lagu wareejiyo xisaabta bangiga?
Muddada wax kala iibsigu waxay ku xidhan tahay bangigaaga. Wareejinta qaarkood waxa lagu dhamayn karaa dhawr saacadood gudahood ama isla maalintaas.
Bangiyada badankood, waxay caadiyan qaadataa maalmo shaqo kahor intaadan ku arag lacagta koontadaada.
Haddii aad samaynayso wareejin markii ugu horraysay, waa inaad abuurtaa koonto cusub “u-wareejin” onlayn ah, oo qaadan karta ilaa 5-7 ganacsi maalmo si loo xaqiijiyo.
Intaa ka dib, waxay qaadan kartaa 2 maalmood oo kale oo shaqo in lagu helo lacagta koontadaada.
Laakiin haddii aad isticmaaleyso MoneyGram, lacagtu waxay ku soo dhici doontaa koontadaada isla maalintaas gudaheeda. Xitaa xisaabaadka cusub waxay qaataan wax ka yar hal maalin si loo xaqiijiyo.
Ma Jirtaa Xaddid Kala Wareejin Kaadhka Hadiyadda?
Haa, waxa jira xad wareejin, oo ku salaysan xeerarka sharciga ee dawladda Maraykanka ee khuseeya xaddidaadaha iibka iyo wareejinta kaadhka hadyada.
Lacagta ugu badan ee uu hal qof ka iibsan karo kaararka hadiyadaha badan waa $ 10,000
Xaddiga ugu badan ee uu hal qof ku iibsan karo hal astaan ​​waa $ 2,000
Intii lagu wareejin lahaa lacagtu waa $ 10,000 macaamil kasta iyo ilaa $ 10,000 30kii maalmood ee taariikheedba.
Tallaabada Ku Saabsan Sida Lacagta Loogu Wareejiyo Kaarka Hadiyadda Loogu Wareejiyo Koontada Bangiga?
Waa kuwan tillaabooyinka loogu wareejiyo kaararka hadiyadda koontadaada bangiga iyadoo la adeegsanayo Xulashada CardCash.
Tag boggan ku yaal Bogga CardCash
Geli kaarka hadiyadda ee aad haysato Ex: Walmart
Ku qor qaddarka kaarka hadiyadda Ex: $ 100
Guji “BIXIYA” iyo dalab ah inta ay ku siin doonaan waxaad ka muuqan doontaa Ex: $ 88.00
Haddii aad aqbasho xaddiga, guji "Hel $ 88.00 Kaash"
Waxaa jiri doona daaqad soo baxaysa oo ku weydiin doonta sida aad jeclaan lahayd in lagu siiyo lacag oo aad doorato PayPal Express
Geli lambarka kaarkaaga hadiyadda iyo PIN oo sii wad inaad ku xirto koontadaada PayPal
Gal xisaabtaada PayPal oo buuxi meelaha loo baahan yahay
Kadib guji “Hel Dheelitirkayga PayPal"
Marka dheelitirku gaadho jeebkaaga PayPal, hadda waxaad lacagta ku wareejin kartaa koontadaada bangiga.
Awoodda aad lacag uga wareejin karto kaarkaaga hore ee koontadaada bangiga waxay ku xirnaan doontaa nooca kaarka aad haysato.
Habka ugu fiican ee lagu hubin karo in kaarkaagu leeyahay astaantan ayaa ah in la hubiyo qaybta adeegga macmiilka ee kaarkaaga hore ama bixiyaha kaarka hadiyadda. Sidoo kale, waxaan aaminsanahay in maqaalkani uu ku siinayo hage ku saabsan sida lacag looga wareejiyo kaarka hadiyadda oo loogu shubo koonto bangi
Sida loo hubiyo haddii Kaarka Amaahdu uu shaqeynayo | Tilmaamaha Tallaabada-2022
Sida Loo Bilaabo Meherad leh Dhib Xumo 2022 | Casharrada Khubarada
10 Siyaabood oo Lacag laguugu siiyo inaad aado Iskuulka Online 2022 -ka
12ka Siyaabood ee Ugu Wanaagsan ee Loogu Bixin Karo Wadahadalka Ingiriisiga 2022
Dunida maanta ayaa si xawli ah u noqonaysa tuulo caalami ah oo sidaas oo kale ah, mid waa in lagu xiraa khadka tooska ah…
Intee In La'eg Ayaan Ku Bixiyaa Raashinka? Talooyin Kaydinta Lacagta
Waxaan ahay hooyo shaqeysa, oo mas'uul ka ah dukaanka raashinka qoyska. Bil kasta, waxaan ka soo iibsadaa raashinka,…
Sida Loo Helo Sicir -dhimista Ardayga ee Tesco 2022 -ka
Dhimista ardayda Tesco waxay awood kuu siinaysaa inaad lacag kaydsato marka aad wax ka iibsanayso onlayn waxayna ka caawisaa dhaqaalahaaga inuu aado…
Daqiiqad 32 akhri
200+ Fikradaha Ganacsi ee Tooska ah oo 2022 kaa dhigi kara Hanti
In badan oo ka mid ah hal-abuuro ganacsi, waxay u wadaan ganacsi siinaya xoriyad ay ku shaqeeyaan waqtigooda…
25ka Blog ee Maaliyadda Shaqsiyeed ee ugu Wanaagsan 2022
Nasiib baad leedahay haddii aad rabto inaad horumariso aqoontaada dhaqaale. Blog-yada maaliyadeed ee gaarka ah waxay noqon karaan miino dahab ah…
Ma ka roon tahay Deynta ama Bixinta? sanadkii 2022
Haddii aad leedahay deyn lagugu leeyahay oo aad leedahay dakhli la iska tuuri karo, waxaa laga yaabaa inay isku dhacaan haddii ay…